သဘာဝတရားကြီးကတော့သင်ပေးနေပါတယ် ……….. ကျွန်တော်တို့ ကရော သင်ယူနေကြရဲ့လား - Myanmar Water Portal
News Burmese Articles Community News Water Themes Agriculture & Irrigation
ရေ လောကကြီးအတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေ အများကြီးထဲကမှ အဓိကပြဿနာကြီး(၃)ရပ်မှာ ရေရှားခြင်း၊ ရေကြီးခြင်းနဲ့ရေညစ်ညမ်းခြင်းတို့ ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော် လွန်ပြီးနောက် ကမ္ဘာလူဦးရေဟာ နှစ်ဆ ကျော် တိုးတက်လာတာကြောင့် ရေသုံးစွဲမှုပမာဏဟာ လည်းတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဓိက စိန်ခေါ်မှုက တော့ ဒီရေလိုအပ်ချက်ကို သတ္တလောကကြီးအ တွက်လည်းထိခိုက်မှုမရှိပဲ လူအားလုံး (အခြေခံလူတန်းစား လူနည်းစု အတွက်ပါ) ဘယ်လို လုံလောက်စေမလဲ ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောင်အနှစ် (၅၀) ရောက်ရင် ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့(၇၅%) ဟာ မြို ပြမှာနေထိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ အကျိုးဆက် အ နေနဲ့ က တော့ လူတွေရဲ့ ရေလိုအပ်ချက်နဲ့သတ္တလောကကြီးကို မပျက်စီးစေပဲ မြစ်တွေကို ဘယ်လို စီမံကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ ရေရရှိနိုင်မှုကို ကန့် သတ်ထားတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေက တော့ မြို့ပြချဲ့ ထွင်လာမှု၊ စီးပွါးရေးတိုးတက်လာမှု၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုနဲ့တိုးတက်လာတဲ့ လူဦးရေအတွက် အစား အ သောက်အများအပြားထုတ်လုပ်ရခြင်းတွေပါပဲ။ ကဲ...... ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ တွေရေလိုအပ်ချက်တွေကို ဘယ်လို ရှာဖွေပြီး ဒီကန့် သတ်ချက်တွေကို ဖြေရှင်းကြမလဲ။
အရင် က တော့ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဒီရေလိုအပ်ချက်ကို သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် က နေပဲထုတ်ယူသုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်။ တိုးတက်လာတဲ့လူဦးရေအတွက် ဒီရေလိုအပ်ချက်ကို ပြည့်မီအောင် ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ရေပိုက်၊ရေကန်တွေလို အ ခြေခံအ ဆောက်အဦးတွေဆောက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အစား အ သောက်နဲ့ နေရာထိုင်ခင်းတွေလည်း အများကြီးလိုအပ်လာတဲ့အတွက် သစ်တောတွေခုတ်ပြီး စားကျက်မြေချဲ့ ထွင်ခဲ့ကြပြီး ကွန်ကရစ် အ ဆောက်အဦးတွေပြည့် နှက်နေတဲ့ မြို့ ပြ နေရာချဲ့ထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သဘာဝတရားကြီး ဘယ်လောက် ပျက်စီး သွားမယ်ဆိုတာ မစဉ်းစားပဲနဲ့ ပေါ့….. ရေလိုအပ်ချက်ပြည့် မီအောင် ရေပိုက်လိုင်းတွေဖောက်ကြတယ်၊ မြစ်တွေကို ပိတ်ကြတယ်၊ဆည်တွေဖောက်လုပ်ကြတယ်။ မြေ အောက်ရေကုန်ခမ်းသွားအာင် တောင်ကြားတွေရေလွှမ်း သွားအာင် ရေ တွေညစ်ညမ်းသွားအာင်တောင် လုပ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ရေပမာဏပြည့် မီအောင်ရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့ရေစီမံခန့် ခွဲမှုကိုနှောင့်ယှက်နေတာတွေက မြေမျက်နှာပြင်တွေကို ကွန်ကရစ်ခင်းတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ သက်တမ်းက နှစ်ပေါင်းသန်းနဲ့ ချီနေပြီဖြစ်တာကြောင့် သူ့ ရဲ့ သဘာဝနည်းပညာတွေကလည်းတိုးတက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာတွေကို အသုံးပြုပြီး လူတွေအတွက်ရော သဘာဝတရားကြီးအတွက်ရော အဆင်ပြေတဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တဲ့နည်းပညာတွေလည်းရှိလာပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့် လမ်းတစ်ခုကို ကွန်ကရစ် အပြည့်မခင်းပဲ သစ်ပင်တွေပါကြားညှပ်စိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးသုံးခြင်းပေါ့။ ဒီလို့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တဲ့နည်းပညာတွေအသုံးပြုထားတဲ့ အ ခြေခံအ ဆောက်အဦးတွေဆောက်လုပ်ခြင်းဟာလည်း ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရေလုံခြုံရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေတဲ့နည်းလမ်း တစ်ခုပါပဲ။
နောက်ထပ် အ ခြေခံကျတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုက တော့ သတ္တလောကကြီးကပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေကို လူသားတွေအ နေနဲ့ အလွန်အကျွံမသုံးစွဲခြင်းပါပဲ....ဒါကို ယေဘူယျအားဖြင့် ရှင်းပြရရင် သဘာဝသယံဇာတတွေကို ကန့် သတ်သုံးစွဲခြင်းနေထိုင်တတ်ခြင်းပါ။
ရေသယံဇာတတွေကို စီမံခန့် ခွဲခြင်းအကြောင်းဆွေးနွေးရရင် ကျွန်တော်တို့ သုံးစွဲနေတဲ့ရေတွေက သတ္တလောကကြီးကပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ ရေအရင်းအမြစ်ပမာဏ လောက်နီးပါးများ ဖြစ်နေပြီလား...... အဲ့ဒါကို သတ္တလောကကြီးကပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ ရေအရင်းအမြစ်ပမာဏ၊ ကမ္ဘာ့ လူဦးရေတိုးတက်လာခြင်း၊ လူတစ်ဦးစီသုံးစွဲတဲ့ ရေပမာဏ ဆိုတဲ့ အချက်(၃)ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးတိုင်းတာပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ လူဦးရေတိုးတက်လာခြင်း ဆိုတာဟာ ရေပညာရှင်တွေအနေနဲ့ ကန့် သတ်လို့ တော့ မရပေမယ့် သတ္တလောကကြီးကပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ ရေအရင်းအမြစ်ပမာဏ နဲ့လူတစ်ဦးစီသုံးစွဲတဲ့ ရေပမာဏအပေါ် အရမ်းကို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ သတ္တလောကကြီးကပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ ရေအရင်းအမြစ်ထုထည်ဟာ အလွယ်တကူထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်မှုနဲ့ ရေအရည်အသွေးပေါ်လည်း မူတည်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ရေပမာဏက ကန့် သတ်ချက်တစ်ခုလောက်ပဲရှိတဲ့အပြင် အဲ့ရေပမာဏကလည်း ရေအရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းမှုတွေကြောင့်လျှော့ချခံနေရပါတယ်။
ဂေဟစနစ်ပျက်စီးခြင်းကြောင့် Ecosystem Serviceများ မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ပဲ ဂေဟစနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းလာတော့တယ်။ ၄င်းဂေဟစနစ်ပျက်စီးခြင်းသည်ပင်လျှင် ရေကြီးရေလျှံခြင်း၊ ရေရှားပါးခြင်း စသော အစွန်းရောက်ရေပြသနာများနှင့် ရေနှင့်ဆိုင်သော ပြသနာတို့ ၏ အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်တောများ၊ ရေဝေရေလဲဒေသများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေလျှံတွင်းများနှင့် မြေကြီးတို့ ကလည်း ရေသံသရာလည်ခြင်းတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍများအဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်။ အဆိုပါရေသံသရာလည်သော စနစ်ကြီး ညစ်ညမ်းသွားသောအခါသို့ မဟုတ် ပျက်စီးသွားသောအခါ မြေအောက်ရေဖြည့်တင်းမှု၊ မြစ်ချောင်းများတွင် သိုလှောင်ထားသောရေပမာဏလည်းလျော့ကျသွားပြီး လူသားတို့ အသုံးပြုသောရေပမာဏအတွက်လည်း ပြည့်မှီခြင်းမရှိတော့ချေ။ အနည်ကျခြင်းနှင့် ဓါတ်မြေသြစာများကြောင့် ညစ်ညမ်းခြင်းတို့ ကိုလျှော့ချနိုင်သည့် မဟာဗျူဟာများမှာ သစ်တောများကိုကာကွယ်ခြင်း၊ သစ်တောများပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ကောက်ပဲသီးနှံ (Cover Crop) များစိုက်ပျိုးခြင်းတို့ ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမဟာဗျူဟာများကို လက်တွေ့ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရေဆိုးရေညစ်သန့် စင်ရန် ကုန်ကျမည့်ငွေပမာဏကိုလည်း လျှော့ချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေဝေရေလဲဒေသများသည် အနည်အနှစ်များကို အနည်ထိုင်စေခြင်း၊ အညစ်အ ကြေးများကို ဖမ်းပေးခြင်းနှင့် ဓါတ်မြေသြစာများကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း တို့ ဖြင့်ရေအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ရေညစ်ညမ်းနေသောနေရာများတွင် သဘာဝဂေဟစနစ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးခြင်းနှင့် လူလုပ်ဂေဟစနစ်များ ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့်ရေအရည်အသွေးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ မြို့ ပြဒေသများတွင် မိုးရေကြီးခြင်းနှင့် စွန့် ပစ်ရေများကြောင့်ဖြစ်သည့် သက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေဝေရေလဲဒေသများကိုပြုလုပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ဒီလို သဘာဝရေဝေရေလဲဒေသတွေရော လူလုပ်ရေဝေရေလဲဒေသတွေရောက ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရေမှာပျော်ဝင်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ထုတ်သန့် စင်ပေးနိုင်တာကြောင့် အခြားသောနည်းလမ်းတွေထက်လည်း ပိုပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ သဘာဝရေဝေရေလဲဒေသများ၊ မြေကြီးစိုထိုင်းဆနှင့် မြေအောက်ရေကိုထိရောက်စွာဖြည့်တင်းမှုများသည် ရေပမာဏသိုလှောင်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနိုင်ရန်အတွက် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော နည်းလမ်းဖြစ်သည့်အပြင် အခြေခံအဆောက်အဦးဖြစ်သော ဆည်များတည်ဆောက်ခြင်းထက်လည်း ဈေးသက်သာသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၅၀တွင် ကမ္ဘာ့ရေလိုအပ်ချက်သည် သုံးဆခန့် မြင့်တက်လာမည်ဟုခန့် မှန်းရပါတယ်။ သို့ သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ က လက်ရှိရေလိုအပ်ချက်ကို ပြည့် မှီနိုင်အောင် မြစ်ချောင်းများမှရေကို အဆမတန်ထုတ်ယူသုံးစွဲနေရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆည်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေပိုက်လိုင်းများသွယ်တန်းခြင်း၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် ရေငန်များ စိမ့်ဝင်လာသည်အထိ မြေအောက်ရေထုတ်ယူသုံးစွဲမှုခြင်းတို့ ဖြင့် လက်ရှိရေလိုအပ်ချက်ကို ပြည့်မီအောင် ရေအရင်းအမြစ်များကို ထုတ်ယူသုံးစွဲနေရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဟာအချိန်အတော်ကြာအထိ အဓိကအရေးကြီးတဲ့ သဘာဝတရားကြီးကို မေ့လျော့ထားပြီး လူလုပ်အဆောက်အဦးတွေဖြစ်တဲ့ ဆည်မြောင်း၊တာ၊တမံတွေ တည်ဆောက်ပြီး ရေလိုအပ်ချက်ကို ပြည့်မီအောင် ကြိုးစားနေခဲ့မိပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ အဲ့အတွေးအခေါ်တွေကို ပြောင်းလဲဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။
စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တဲ့နည်းပညာတွေ အသုံးပြုထားတဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦးများ
စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တဲ့နည်းပညာတွေ အသုံးပြုထားတဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦးတွေဆိုတာဟာ သဘာဝတရား၊သဘာဝနည်းပညာ ဒါမှမဟုတ် သဘာဝနည်းပညာနဲ့ ခေတ်မီနည်းပညာကို ပေါင်းစပ်ထားသော နည်းလမ်းကို အခြေခံပြီးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အဆောက်အဦးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝ နည်းပညာသုံးထားတဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ ပြတွေမှာအစိမ်းရောင်အဆောက်အဦးများကို အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးများအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခြင်းဟာလည်း စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တဲ့နည်းပညာတွေကို ပိုမိုအသုံးပြုဖို့ အားပေးခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ ဒီစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တဲ့နည်းပညာတွေကို စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုခြင်း၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများ တည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုခြင်းဟာလည်း ရေလုံခြုံရေးကို သဘာဝနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီး မြှင့်တင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစိမ်းရောင်နည်းပညာနဲ့ အညိုရောင်နည်းပညာတွေ ပေါင်းစပ်ပြီး အခြေခံအဆောက်အဦးများကို ဆောက်လုပ်ခြင်းဟာ ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစေတဲ့အပြင် စွန့် စားမှုများကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ မြို့ ပြတွင် အစိမ်းရောင်အဆောက်အဦးများဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် ရေရရှိမှုများပြားစေခြင်း၊ ရေအရည်အသွေးကောင်းမွန်လာခြင်း၊ ရေကြီးရေလျှံခြင်းနှင့် ရေရှားပါးခြင်းများကိုလျှော့ချပေးခြင်း အစရှိတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေကို ရရှိစေပါတယ်။
အဆင့်မြင့် စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ
ရေကို ထိထိရောက်ရောက်သုံးပြီးအနာဂါတ်မှာ တိုးတက်လာမယ့် အစားအစာလိုအပ်ချက်ကို ပြည့်မီဖို့အတွက် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာတွေဟာ အရမ်းကို အရေးပါပါတယ်။ မြေအခြေအနေထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မြေဆီလွှာမပျက်စီးအောင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သီးနှံများ ရာသီအလိုက် သီးထပ်စိုက်ပျိုးခြင်း စသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဟာ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်သော အစားအသောက်ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂေဟစနစ် လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ စိုက်ပျိုးရေးစနစ်တွေက ပြင်းထန်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေကို ရရှိစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဂေဟစနစ်ကို ထိခိုက်မှုတွေကိုလည်း သိသိသာသာ လျော့ကျစေပါတယ်။
Gilbert F. Houngbo( Chair of UN-Water) ကဒီလိုပြောဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တွေဟာ အချိန်အတော်ကြာအထိ ရေစီမံခန့် ခွဲမှုကောင်းမွန်ဖို့လူသားတွေတည်ဆောက်ထားတဲ့ အခြေခံ အဆောက်အဦးတွေကိုပဲ အားကိုးနေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့် ပဲ ကျွန်တော်တို့ ဟာ သဘာဝနည်းပညာတွေနဲ့ ကင်းကွာလာခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၃၀ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များ အစီအစဉ်ကို စတင်ကျင့်သုံးလာတာ သုံးနှစ်ရှိပြီဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဟာ သဘာဝကို အခြေခံတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး ရေစီမံခန့် ခွဲမှုလိုအပ်ချက်တွေကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဟာ နည်းလမ်းတွေကို တစ်ခုပြီး တစ်ခုလိုက်ရွေးချယ်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သဘာဝနည်းပညာတွေနဲ့လူလုပ်အဆောက်အဦးတွေကြား အတင်းလိုက်ပြီးဆက်စပ်ပေးနေဖို့ မလိုပါဘူး။ အခြေအနေတိုင်းအတွက် သဘာဝတရားနဲ့ လူလုပ်အခြေခံအဆောက်အဦးတွေက မျှခြေတစ်ခုကို ထိန်းထားနိုင်ဖို့ ပဲလိုတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေက ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ရေလိုအပ်ချက်ကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပြီးသားပါ။ ကျွန်တော်တို့့အတွက် တကယ်လိုအပ်နေတာကတော့ အဲ့ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေမှာ သဘာဝနည်းပညာကို ထည့်သွင်းအသုံးချဖို့ ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။
Translated by Yin Mon Aung
Source Link: International Water Association: Nature is teaching........ Are we learning?
Urban Development Ecosystem Services Integrated Water Resources Management
More than K9 billion owed for irrigation in Mandal...
Integrated Water Resources Management Water Quality Flooding Ecosystem Services Climate Change Drinking Water Groundwater Waste Water Dams & Bridges Urban Development